Momba anay - Hangzhou Sihope Technology Co., Ltd.
Hangzhou Sihope Technology Co., Ltd. dia orinasa teknolojia avo lenta, hita ao amin'ny Fuyang National High-tech Park, Hangzhou.
Tamin'ny taona 1994, ny orinasa dia nametraka mihoatra ny 40.000 metatra toradroa zavamaniry izay manokana amin'ny fitsaboana molekiola sivana oksizenina rafitra, azota milina, foibe famatsiana oksizenina rafitra, foibe suction rafitra, rivotra compressor vondrona, rivotra disinfector, voapoizina rivotra fitaovana fanadiovana, Modular Ozone mpamokatra. Ny teknolojia Sihope dia manana teknolojia patentina 76, patanty famoronana nasionaly 12 (ny orinasa dia orinasa mpanamory patanty amin'ny faritany), vokatra roa no nampidirina tao amin'ny National Torch Plan; andian-dahatsoratra telo no voasokajy ho vokatra teknolojia avo lenta. Ny orinasanay dia tsy vitan'ny hoe nandalo YY / T 0287, ISO9000, 13485 rafitra kalitao, fa nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny fiarovana ny famokarana standardization ambaratonga 3 orinasa, National vokatra sy ny kalitaon'ny serivisy fihetsiketsehana orinasa, nasionaly tsara indrindra tsy fivadihana benchmark orinasa fampisehoana. Ny "Pressure Swing Adsorption Technology Research Center" dia natsangana niaraka tamin'ny andrim-pikarohana siantifika maromaro.
Hatreto, misy orinasa 1000 mahery sy andrim-pitsaboana nisafidy ny vokatray. Mba hiantohana ny tombontsoan'ny mpanjifa, ny orinasa dia nanangana rafitra fitantanana kalitao tonga lafatra, miaraka amin'ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001 sy ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitaon'ny fitaovana ara-pitsaboana ary ny rafitra fanaraha-maso sy fanaraha-maso sy fanaraha-maso ny vokatra aorian'ny varotra, fifampidinihana ara-potoana amin'ny mpanjifa mba miantoka tsara ny fiasan'ny fitaovana. Ankoatr'izay, ny vokatra dia aondrana any Korea, Sodàna, Irak, Bangladesh, Vietnam, Iran, Kazakhstan, Russia ary firenena sy faritra hafa. Sihope dia hijanona amin'ny ambaratonga ambony miankina amin'ny fanavaozana mitohy, ny famolavolana matihanina ary ny tombony amin'ny famokarana.
Ny orinasa dia miara-miasa akaiky amin'ny famolavolana matihanina nasionaly sy ivon-toeram-pikarohana sy andrim-panjakana, fanavaozana ara-teknolojia mitohy, Manatsara ny fahombiazan'ny vokatra sy ny kalitao. "fahamarinana, fahombiazana, matihanina, fanavaozana" no foto-kevitra fototra izay mikendry ny hanome mpanjifa vokatra tsara kokoa, azo ianteherana, mitsitsy angovo bebe kokoa ary mamorona marika lehibe kilasy voalohany.
Ny vokatra Sihope azo antoka kokoa, mora kokoa, mahomby kokoa ny angovo, marani-tsaina kokoa!
Ny fanahy dia mitarika dia lavitra!